Nala soo xiriir - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Cinwaanka: No.999 Fushan Road, Xiaolan Economic Zone, Nanchang City, Jiangxi 330200, PR China
Isniinta-Axad: 24 saacadood khadka tooska ah
Waa soo saare xirfadle ku takhasusay cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegga aaladaha caafimaadka. Waa shirkad ay wada leeyihiin shirkadda Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (soo gaabin: Sanxin Medical, code stock: 300453), iyadoo Yunnan Sanxin ku xididaysan tahay Yunnan ayaa gacan ka geysan doonta horumarinta warshadaha caafimaadka deegaanka iyo adeegyada caafimaadka; isla mar ahaantaana, waxay qaban doontaa shaqo wanaagsan "buundo-madax" u ah qaabeynta Sanxin Medical ee ku taal koonfur-galbeed, oo ka sii baxaya Koonfurta Aasiya iyo Koonfur-bari Aasiya. Shirkaddu waxay ku taal aagga Kirin ee Anning Industrial Park, Kunming City, Gobolka Yunnan, oo wadarta guud ka badan 60,000 mitir murabac ah; waxay inta badan soo saartaa taxane faleebo-dhamaadka sare ee la tuuri karo iyo alaabooyin taxane ah oo dhiig lagu nadiifiyo.
Waa shirkad farsamo sare oo heer qaran ah oo ku takhasustay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka, iibinta iyo taageerada farsamo ee taxanaha hemodialysis ee qalabka caafimaadka. Waa bixiye qalab casri ah oo heer sare ah iyo xalka.
Waxaa la aasaasay bishii Ogosto 2018, oo leh raasamaal diiwaangashan oo ah 12 milyan yuan, waxay ku takhasustay bixinta dhinac saddexaad oo ah bakhaarro badan, qaybinta, maareynta sahayda iyo adeegyada kale ee saadka ee qalabka wax soo saarka iyo shirkadaha ka shaqeeya. Shirkaddu waxay ku taal aagga Xiaolan ee Dhaqaalaha iyo Teknolojiyada Horumarinta waana shirkad ay wada leeyihiin shirkadda Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (lambar kayd: 300453).
Shirkaddu waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka iyo maaraynta qalabka caafimaadka; ganacsiga soo dejinta ee alaabta ceeriin iyo kaabayaasha, qalabka farsamada, qalabka, qalabka dayactirka iyo teknoolojiyada la xiriira ee looga baahan yahay soo-saarista iyo cilmi-baarista cilmiga ee shirkadda, iyo ka shaqeynta qalabka dibedda laga keeno ee shirkadda.
Ningbo Filal Medical Products Co., Ltd. waa shirkad ku takhasustay R&D, wax soo saarka iyo iibinta alaabada qalliinka wadnaha iyo jirka lagu tuuri karo. Waxay soo saartaa miirayaasha dhiigga ee lagu kaydin karo dhiigga, miirayaasha microembolism dhiigga la tuuri karo, iyo sambabaha wadnaha ee macmalka ah ee la tuuro. Xirmada tubbada wareegga dhiigga ee wareegga dheeriga ah (tubbada wareegga dhiigga ee ka baxsan wareegga dhiigga), aaladaha la iska tuuro ee qabow ee wadnaha iyo alaabada kale ayaa loo iibiyaa isbitaalada waaweyn ee dalka oo dhan, waxaana si caafimaad ahaan loogu adeegsaday in ka badan 300 oo isbitaallo, dhammaantoodna waxay gaareen natiijooyin aan loo baahnayn. Tayada badeecadu waxay ka mid tahay kuwa ugu fiican warshadaha waxayna sumcad ku dhex leedahay dadka isticmaala.
Sichuan Weilisheng Medical Technology Co., Ltd. ("Sichuan Weilisheng" oo gaagaaban), oo la aasaasay 2018, waa shirkad horumarsan oo ku takhasustay cilmi baarista iyo horumarinta, soo saarista, iibka iyo adeegga aaladaha caafimaadka. Sichuan Weilisheng waa shirkad ay wada leeyihiin shirkadda Jiangxi Sanxin Medical Technology Co., Ltd. (lambarka kaydka: 300453). Ka dib qaabka Sanxin ee horumarinta warshadaha koonfurta ilaa waqooyiga, wuxuu leeyahay qaab kale oo istiraatiijiyadeed oo bari iyo galbeed ah, kuna tiirsan Chengdu Sida xarun muhiim u ah hindisaha “Belt iyo Wadada”, waxaa naga go'an inaan noqono hormuudka waxsoosaarka warshadaha dhiig nadiifinta oo leh horumarsan ikhtiraac, xariifnimo iyo tayo, xoojinta saamaynta caalamiga ah ee sumadaha qaranka.